Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah
Waa qaanuunka ajaanibka waxa xukuma qofka loo oggolaanayo joogista gudaha Iswiidhan.
Waa kuwee noocyada sharci deganaansho ee jiraa?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo sharciyada deganaansho ah:
Sharci deganaansho ee ku meel gaarka ah
Sharciga deganaansho ee joogtada ah
Iswiidhan dadka badankoodu waxay helaan sharci degganaansho oo wakhtigiisu cayimanyahay. Marka aad sharci degganaansho oo wakhtigiisu cayimanyahay aad soo haysatay ugu yaraan saddex sano ayaad fursad u haysataa inaad codsato sharciga degganaansho ee joogtada ah.
Maxay tahay micnaha sharciyadan deganaansho ee kala duwan?
Qaxoontinimo - 3 sano
Adigaaga helay mustawaha qaxoontinimada waxaad helaysaa sharci degganaansho oo ku meel gaar ah oo saddex sano ah. Saddex sano ka dib waa laguu dheereyn karaa sharciga digganaashada hadii aad weli u baahantahay gabbaad. Sharci degganaansho oo la dheereeyay wuxuu ansax yahay laba sano.
Saddex sano ka dib waxaad xitaa fursad u haysataa inaad codsato sharci degganaansho oo joogto ah.
Heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo - 13 bilood
Adigaaga helay mustawaha qof u baahan badbaado kale waxaad helaysaa sharci degganaansho oo ku meel gaar ah oo ah 13 bilood. 13 bilood ka dib waa laguu dheereyn karaa sharciga digganaashada hadii aad weli u baahantahay gabbaad. Sharci degganaansho oo la dheereeyay wuxuu ansax yahay laba sano.
Saddex sano ka dib waxaad xitaa haysataa fursada inaad codsato sharci degganaansho oo joogto ah.
UR Skola ayaa samaysay filim sharaxaya farqiga u dhaxeeya sharciyada deganaansho ee kala duwan. Filimkan waa af iswiidhish. Wuxuu leeyahay qoraalyo hoosta ah oo ah iswiidhish, carabi, kurdi, faarsi, soomaali iyo tigrinya.
Dheeraad ku saabsan waxa shuruud u ah sharciyada deganaansho ee kala duwan ka akhri halkan.